Himilada - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Daryeelka Waalidka Cusub
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Kheyraadka Xubinta > Qorshahaaga iyo Daboolidaada > Hadafka Ururka
Wax ka baro Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee faa'iidooyinka aragtida Washington ee carruurta iyo dadka waaweyn.
Ceymiskaaga aragtida ee leh CHPW
Aragtidaadu waa qayb muhiim ah oo caafimaadkaaga ka mid ah, markaa daryeelka indhaha ee joogtada ahi waa inuu ahaadaa mid si fudud loo heli karo. Uma baahnid gudbin dhakhtarkaaga ah si aad u hesho baaritaanno aragga oo joogto ah.
Wax ka baro Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee aragtida Washington (CHPW) ee dadka waaweyn iyo carruurta.
Daryeelka indhaha ee dadka waaweyn (da'da 21 iyo wixii ka weyn)
Imtixaannada indhaha ee joogtada ah waxaa lagu daboolaa qorshahaaga CHPW. Taasi waxay ka dhigan tahay inaadan u haysan wax lacag bixin ah iyaga.
Imtixaannada joogtada ah ee loogu talagalay dadka waaweyn ayaa lagu daboolay Aragti sareshabakada bixiyaasha.
Caymiskaaga joogtada ah waxaa ka mid ah hal baaritaan indhaha ah 24-kii biloodba.
Daryeelka indhaha ee carruurta (da'da 20 iyo ka yar)
Carruurta xubnaha ka ah CHPW waxay helayaan waxtarrada daryeelka indhaha ee soo socda:
Imtixaannada joogtada ah ee indhaha loogu talagalay carruurta waxaa daboolaya CHPW. Carruurta (da'da 20 iyo ka yar) ayaa hal jeer laga qaadi karaa baaritaanka indhaha sanad kasta.
Dayactirka iyo muraayadaha indhaha waxay daboolayaan carruurta da'doodu tahay 20 ama ka yar.
Muraayadaha indhaha ee ugu horeeya loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 20 iyo wixii ka yar ayaa loogu talagalay xubnaha CHPW iyada oo loo sii marinayo Hay'adda Daryeelka Caafimaadka Washington (HCA). Waxaad weydiisan kartaa dhakhtarkaaga daryeelka aasaasiga ah inuu kuu gudbiyo takhasus xagga aragtida ah ee ilmahaaga, ama waad isticmaali kartaa kuweenna qalabka raadinta bixiyaha mid la helo.
Muraayadaha ayaa waxtar u leh dadka waaweyn
Faa'iido dheeri ah oo loogu talagalay xubnaheenna, CHPW waxay siisaa muraayadaha indhaha xubnaha 21 iyo wixii ka weyn.
Si aad waxbadan uga barato waxtarkaan, booqo bartayada Muraayadaha indhaha oo lacag la’aan ah .
Imtixaanno iyo qalliino caafimaad ahaan lagama maarmaan ah
Mararka qaarkood, baahidaada daryeelka indhaha waxay ka gudubtaa baaritaanka joogtada ah iyo qalabka aragtida. CHPW sidoo kale waxay dabooshaa adeegyadan:
Baaritaanka indhaha si loo ogaado loona daweeyo xaalad caafimaad
Qalliinka indhaha ee xaaladaha caafimaad sida glaucoma, go'itaanka indhaha, iyo indha-beelka
Raadi adeeg bixiye shabakad CHPW ah oo kuugu dhow adiga qalabka raadinta bixiyaha.
Ogolaansho hore ayaa loo baahnaan karaa. Si aad u ogaatid haddii adeeggu u baahan yahay oggolaansho hore, la hadal dhakhtarkaaga. Waxa kale oo aad ka wici kartaa Adeegga Macaamiisha 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711) Isniinta ilaa Jimcaha, laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo
Taariikhda Cusboonaysiinta Ugu Dambeysa: Juun 21, 2021